Dharka Patchwork - Sidee loo doortaa midka saxda ah? Noocyada, soo jeedinta iyo wax ka badan!
Hadii aad soo galayso aduunka boobka Waa inaad ogaataa in doorashada dharka ay tahay waxa ugu muhiimsan si ay shaqadu u hesho natiijada aan raadineyno. Haddaba, hoos waxaan idiinkaga tagaynaa dhammaan talada iyo Tilmaamaha maskaxda lagu hayo markaad dooranayso oo aad la shaqaynayso dharka Patchwork.
8 xabo oo cudbi ah
30pcs 25 x 25...
Dharka suufka ah ee...
Dharka suufka ah...
Sida loo doorto dharka Patchwork
Doorashada dharka Patchwork Waa mid ka mid ah tallaabooyinka aasaasiga ah. Sababtoo ah doorashada wanaagsan ee iyaga ka mid ah ayaa naga tagi doonta natiijo wanaagsan oo ah shaqada aan dooneyno inaan faahfaahinno. Runtu waxa ay tahay in mar kasta aanay ahayn tallaabo fudud in la qaado. Xitaa kuwa isticmaalaya farsamadan muddo dheer, mar walba ma rabaan inay ka baxaan kuwa caadiga ah. Sababtoo ah malaha taasi waxay ka dhigan tahay 'qaadida tallaabo been ah'.
Nooca dharka ee Patchwork
Waxaan leenahay ballaaran noocyo kala duwan oo dhar ah in la doorto. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa 100% cudbi. Sababtoo ah waxay ku fiican tahay shaqadan iyada oo ay ugu wacan tahay cufnaanta ay leedahay. Dharka suufka ah ee noocan oo kale ah ayaa leh cufnaanta sare marka loo eego kuwa caadiga ah, iyo sidoo kale miisaan yar oo sarreeya. Markaa tayadiisa ayaa sidoo kale ka sii fiican.
Waa in la aqoonsadaa inay xoogaa qaali ah yihiin, markaa waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad isku darto suufka iyo polyester-ka labadaba, inkasta oo ay yihiin xulashooyin halis ah. Wax kasta oo ka badan xagga dhammaystirka. Sidaa darteed, maadaama suufku yahay nooca ugu muhiimsan ee dharka lagu doorto, waxaad haysataa noocyo kale.
Seda: Shaki la'aan, waa maro aan ka tagi doonin natiijo la yaab leh. Qof kastaa wuu jeclaan doonaa dhamaadka waxayna rabaan inay nuqul ka sameeyaan naqshadaada. Runtu waxay tahay in ay sidoo kale leedahay dhinaceeda taban. Waa maro qaali ah oo ay adag tahay in lagu shaqeeyo sababtoo ah way siibtaan oo aad bay u dhuuban tahay.
Cudbiga suufka ah: Halkan waxaan ku haynaa ikhtiyaarka ugu fiican marka aan ka fekereyno samaynta kabaha jiilaalka iyo sidoo kale koofiyadaha sariiraha labajibbaaran ama carruurta.
Lana: Dhowr sano ka hor waxay ahayd mid ka mid ah boqorada waaweyn ee dharka. Laakiin maanta sidii hore looma isticmaalo. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qiimo sare, sidaas darteed ma aha mid aad loogu talinayaa.
Lino: Way ka dhumuc yar tahay suufka. Caadi ahaan waxay u egtahay mid aad u fiican labadaba fikrado casri ah oo dheeraad ah iyo qaar ka mid ah qaabka canabka.
Xaqiiqdu waxay tahay in ka dib markii la ogaado noocyada dharka, waa in la sheegaa in kabaha iyo sidoo kale mashaariicda kale, 100% suufka dabiiciga ah ayaa noqon doona doorashada ugu fiican. Sida ikhtiyaarka labaad, waxaan ku haray linen.
Dooro midabada dharka
Waa run in aynaan samayn karin hal xeer. Sababtoo ah qof kastaa wuxuu leeyahay dhadhankiisa, labadaba dhar iyo midabba. Laakiin waa run in marmarka qaarkood shakiyadu aysan noo iman sababtoo ah dharka laftooda, laakiin sidoo kale sababtoo ah midabada. Patchwork maaha mid caajis ah marka la eego macnahan, laakiin waa inaan isku daynaa midabyo iyo midabyo aan madaxeena dhaawacin marka ay tahay inaan ku dhufanno iyaga.
Markaa waa inaan muujinaa midabada aasaasiga ah sida casaan, jaalle iyo buluug. Laga bilaabo iyaga iyo isku darkooda, waxaan heli doonaa mauve, cagaar iyo oranji. Laga soo bilaabo kan dambe waxaan sidoo kale tixraaci karnaa hadhka cusub, oo ku dhex jira midab isku mid ah. Ma dhibayso inaan doorano kuwa aad door bidayso, laakiin iyada oo aan aad loo muujin.
Tani waxay ku fekereysaa midabada aasaasiga ah iyo kan sare Waxay naga tagtaa fikradda kuwa aan sidoo kale ku dhex dari karno Patchwork si aan natiijo wanaagsan u helno.
Halkee laga iibsan karaa dharka Patchwork
Helitaanka dharka si aad u bilowdo samaynta Patchwork waa mid aad u fudud. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah waxaan haysanaa laba waddo oo kala duwan oo aan qaadno.
Dhinac, dukaamada farsamada gacanta iyo sidoo kale haberdashery noloshooda oo dhan, had iyo jeer waxay leeyihiin maryaha kor ku xusan. Kaliya waa inaad raadisaa kuwa ku dhow meesha aad deggan tahay oo waxaad arki doontaa sida aad u haysato wax kasta oo aad u baahan tahay halkaas. Waxaad ka iibsan kartaa mitirka oo waxaad waydiin kartaa dhammaan kuwa leh xoogaa qiimo dhimis ah. Gaar ahaan taas oo ay ka hartay tiro yar, hubaal waxaan heli karnaa dalabyo waaweyn.
Dabcan, dhanka kale, waxaad sidoo kale sameyn kartaa iibso dharka Patchwork onlayn. Waxaa jira bogag badan oo aad geli karto. Dhexdooda, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato dhammaan noocyada dharka, adoo eegaya buug-gacmeedka farsamada. Sidoo kale hel dalabyo kala duwan, midabyo iyo dhar horay loo gooyay. Bogagga sida Amazon had iyo jeer waxay leeyihiin noocyo kaamil ah oo qiimo aan la jabin karin. Markaa waa mid ka mid ah fursadaha in la tixgeliyo.
Sida loo xidho maro
Marka hore waa in aan soo ururinnaa dhammaan qaybaha marada ee aan gooyay. Si ay gebi ahaanba isku mid noqdaan, waxaa habboon in la kaweeyo ka hor inta aan la isku dhejin. Si aad fikrad u hesho, waxaan ku dhejin doonaa qaybaha dharka ee midba midka kale ee safka. Markaa, waxaan ka bilaabi doonaa tolida safka hore si siman.
Marka aan helno saf dhan, ka dib waxaan aadi doonaa kan ugu hooseeya, sidoo kale waxaan toli doonaa dhammaan qashinka safkan cusub.
Ugu dambeyntii, waxaan ku biiri doonaa kuwa safka sare sida kuwa hoose. Tani waa qiyaas ahaan sida loo tolo, laakiin si aad ugu biirto maryaha waa in aan qaadnaa qaybta hore oo aan waji ka waji u dhignaa tan labaad. Waxaan iyaga ku biirnaa biinanka, kaliya aagga meesha lagu tolo. Kadib, waxaanu ku toli doonaa mishiinka oo aanu ka saareynaa biinanka la sheegay. Hadda waxaynu haysan doonaa qaybo ka mid ah laba xabo oo aan mar dambe mid keliya haysan.
Waa inaan tolnaa inta soo hartay si aan u helno hal gabal oo gabal ah. Haddii aad rabto inaad aragto oo aad si fiican u fiirsato sharraxaadaha, markaa ha seegin fiidiyowga soo socda, kaas oo ku habboon bilowgayaasha.
sida dharka loo gooyo
Inta badan dharka Patchwork waa in la gooyaa dunta. Taasi waa, ka samee gooyn marada oo barbar socota geeskeeda. Tan waxaan u baahan doonaa:
Saldhig ama goynta
Marka aan helno dhammaan agabka, waxaan raaci doonaa tillaabooyinkan.
Marka hore, waxaanu bireynaa dharka si aan uga fogaano helitaanka nooc kasta oo laalaab ah. Waxaan ku dhejineynaa dharka birta ama saldhigga goynta, si ay si buuxda ula jaanqaadaan calaamadaha sheegaya in birta badanaa leedahay. Waxaad samayn kartaa gooyn ugu horeysay si aad awood ugu yeelatid dharka.
Kadibna, waxaanu gooyn doonaa dhererka barbar socda cidhifka ama cidhifka. Isticmaal mastarad si aad u ogaato inta dhar ah ee aad jarayso, taas oo ku xidhan waxaad u baahan tahay. Xusuusnow inaad uga tagto meel bannaan oo tollayn ah. Waxaad ka tagi kartaa 0,7 sentimitir. Isku day inaad gooyo nadiif ah ku sameyso dharka, sababtoo ah haddii kale, si xun ayaa loo gooyaa oo leh qaybo aan caadi ahayn. Balaadhka ayaa loo gooyaa si isku mid ah, sidaas darteed helitaanka qaybo siman. Haddii aad rabto in aad gooyso dharka goobada, ka dibna waxaad u baahan doontaa gooyo wareeg ah oo qaabka kombuyuutar ah.
sida ay isugu laabmaan
Waxaa jira dhowr siyaabood oo aan u leenahay inaan isku laabino maro ama ku kaydinno. Mid ka mid ah kuwa ugu fudud ayaa lagu tilmaamay 'rubuc buuran'. Waxay yihiin qaybaha waaweyn ee dharka lagu gooyay qaab leydi ah. Waxaan isku laabnaa dharkan kala badh. Haddaba, gabalkaas yar ee natiijadiisa inoogu soo baxay, waa in aynu laba u kala qaadnaa, oo ah in aynu laba calaamadood u samayno si siman oo laba laab ah. Markaa, ugu dambeyntii, waxaan yeelan doonnaa leydi aad uga yar oo dhar ah, maadaama aan wali laabi doono mar kale.
Mar labaad, waxaan ku sawirnaa khad khayaali ah iyada oo loo marayo bartamaha. Waxaan isku laabnaa hal cidhif oo u dhexeeya xaruntaas ka dibna kan kale. Si aad 'xidho' marada ugana ilaaliso in ay furto ama dib u noqoto, waxa aad dhigaysaa mid ka mid ah darafyada ka soo baxa gudaha mid kale. Mid kale oo ka mid ah siyaabaha loo laalaabiyo oo maryaha loo ururiyo, ayaa naga caawinaysa qaababka qaar, halkaas oo aan ku duubi doono dharka si dhammaantood loo arko. Tani waxay ku fiican tahay kuwa yaryar, qashinka, kuwaas oo ah midabyo ama qaabab kala duwan. Sidaas awgeed, waxaan ku yeelan doonaa si wanaagsan oo habaysan oo meeshooda ah.
Sidee loo dhaqaa dharka balastarka ah?
Su'aashani way yara adagtahay in laga jawaabo. Sababtoo ah bilawga, in la dhaqo ama aan la dhaqin maryaha balaastikada ah ayaa had iyo jeer abuura xoogaa muran ah. Wax kasta oo ka badan sababtoo ah waxaa jira dad badan oo doorta inaysan dhaqin, halka kuwa kale ay ku faraxsan yihiin inay sidaas sameeyaan.
Waa in aan ku bilownaa in aan dhahno 100% dharka suufka ah ee la isticmaalo, way yareeyaan marka ugu horeysa ee la dhaqo. Sidaa darteed, dad badan ayaa raba inay dhaqdaan ka hor, mana rabaan, marka shaqada la dhammeeyo, sababtoo ah way dhaawacmi kartaa. Sidoo kale, dhanka kale, haddii aad ku shaqeyso maro madow way libdhi karaan. Anigoo waxaas oo dhan maskaxda ku haya, aan aragno sida loo dhaqo dharka Patchwork.
Way fiicantahay in lagu dhaqo gacanta. Sababtoo ah waxaan aad u ilaalin doonaa dharka, inkastoo haddii aad haysato bac khaas ah mashiinka dharka, waxaad mar walba ku dhejin kartaa dharka intiisa kale.
Haddii aadan rabin in duntu ay sii baaba'do, dabadeed, dhig weel weyn oo ku shub biyo diirran. Dusheeda dhowr dhibcood oo khal ah, mar dambe ma jiro. Taasi waxay ka dhigaysaa midabada inay sii joogaan oo aanad ka welwelin inaad mar dambe sii luminayso.
Waxaad qooyay maryaha wax yar ka dibna baddal biyaha, ku dar saabuun yar oo ku raaci biyo qabow. Maryaha hawada ha engegaan. oo diyaar ah. Dabcan, haddii aad rabto inaad badbaadiso dhammaan tillaabooyinkan, waxaad sidoo kale ku nadiifin kartaa tirtirayaasha nuugaya midabada. Waxaad ka heli doontaa dukaan kasta oo ay la socdaan alaabta lagu dhaqo iyo nadiifinta.
Mashiinka dharka » Dharka Patchwork